१ बजेसम्म १ अर्ब बढीको कारोबार, सबैभन्दा बढी कुन कम्पनीको कारोबार ? - सिम्रिक खबर
१ बजेसम्म १ अर्ब बढीको कारोबार, सबैभन्दा बढी कुन कम्पनीको कारोबार ?
काठमाडौं । साताको कारोबारको दोस्रो दिन सोमवार कारोबार शुरु भएको दोस्रो घण्टासम्ममा नेप्से परिसूचक १ हजार ५८८ दशमलव १८ विन्दुमा पुगेको छ । दिउँसो १ बजे सम्म उक्त अवधिमा परिसूचक २ दशमलव ४३ अंक बढेको हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि दोस्रो घण्टामा शून्य दशमलव ९४ अंक बढेर ३१३ दशमलव २८ विन्दुमा पुगेको छ । १८४ ओटा कम्पनीको कारोबार हुँदा दोस्रो घण्टामा रू. १ अर्ब ६ करोड ३६ लाख ६७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएकोे छ ।
अहिलेसम्म १८ हजार ६० पटक कारोबार भएको छ । जसमा ३८ लाख ३३ हजार ६४९ कित्ता शेयर खरिद विक्री भएको छ । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. १० करोड ४८ लाख ६३ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । यो दिन जलविद्युत् समुहको परिसूचक सर्वाधिक १ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको छ । जलविद्युत् समुहको परिसूचक सर्वाधिक बढेको यो अवधिसम्म रैराङ हाइड्रोको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस अवधिसम्म वित्त समूह, निर्जीवन बीमा समूह, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह र लघुवित्त समुहको परिसूचक भने घटेको छ ।